टिकटक स्टार सिया कक्कडको आत्मह-त्याको रहस्य खुल्यो – Jagaran Nepal
२६ बैशाख २०७८, आइतबार
टिकटक स्टार सिया कक्कडको आत्मह-त्याको रहस्य खुल्यो
Jagaran Nepal मंगलबार, आषाढ १६, २०७७
एजेन्सी – टिकटक स्टार सिया कक्कडको देहत्यागको खबरले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्यो । उनले किन यस्तो कदम उठाइन् भनेर कसैले अझसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । सिया सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहने गर्थिन् । उनी निककट भविष्यमा नै ठूलो प्रोजेक्टमा देखिने तयारीमा थिइन् तर उनले यस्तो गरिन् । उनले देहत्याग गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि टिकटकमा केही भिडियो शेयर गरेकी थिइन् । ती भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेका छन् ।
पछिल्लो अनुसन्धानका अनुसार टिकटकमा भाइरल भएकी सियालाई विभिन्न प्रकारका ध म्की आइरहेका थिए । यद्यपि, उनको घटनाको विषयमा प्रहरीले केही तथ्य बाहिर ल्याएको छैन । स्टार शिवानीको उनकै सैलूनभित्र उनकै साथीले ज्यान लिएका छन् ।
आइतबार शिवानीकी साथीले सैलुन खोल्दा त्यहाँ दुर्गन्ध फैलिएको छ र बेड खोलेर हेर्दा शिवानीको शव भेटेको भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करले बताएको छ । स्रोतका अनुसार शिवानीका साथीले घाँटीमा दाग देखेका थिए र उनको मोबाइलसमेत गायब थियो । प्रहरीले पिताको बयानको आधारमा आरिफ नामका एक व्यक्ति विरुद्ध मु-द्दा दर्ता गरेको छ । प्रहरीका अनुसार ह त्या दुई दिनअघि भएको थियो ।
शिवानीकी आमा गीताका अनुसार तीन वर्ष अघि आरिफले शिवानीको बाटो रोकेका थिए । यसबारे शिवानीले प्रहरीमा ऊजुरी पनि दिएकी थिइन् । तत्पश्चात् प्रहरीले उनीमाथि कु-टपि-ट पनि गरेका थिए र आरिफले पछि माफी मागेका थिए । यसैको बदला लिनका लागि शिवानीको ह त्या गरिएको हो कि भन्ने आमालाई शंका छ ।
सुटुक्क माल्दिभ्स हानिएकी अभिनेत्री जाह्नवी कपूरलाई आइ पर्यो अर्को बिपत
प्रकाश सुवेदीले कसको निर्देशनमा टिभीबाट शिल्पा पोखरेलको चरित्र ह त्या गरे? करिश्मा मानन्धरले खोलिन् रहस्य, यस्तो रहेछ बास्तविकता (भिडियो हेर्नुहोस्)
आमा बन्दै प्रियंका, प्रियंका आँफैले तस्विर सेयर गर्दै भनिन् ‘हो, हामी गर्भवती छौं’
के नायिका प्रियंका कार्की गर्भवती छिन ? हेर्नुहोस् तस्बिरमा
मनिषाले भावुक हुँदै भनिन्, मेरो बच्चा हुन्छ भन्ने सोचेर नै हतारमा विवाह गरेकी थिए तर पाठेघरकै क्या न्स र हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेकी थिइन (भिडियो हेर्नुस्)
जयाको एक डिनरले ल्याइदियो रेखाको जिवनमा भुइचालो, सधैंको लागि यसरी छुट्यो अमिताभसंग रेखाको प्रेम
निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् बैसाख २६ गते देखि जेठ २ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
आज बैशाख २६ गते आईतबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् बैसाख २५ गते देखि जेठ १ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
आज बैशाख २५ गते शुनिबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
आज बैशाख २४ गते शुक्रबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
आज बैशाख २३ गते बिहिबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
आज बैशाख २२ गते बुधबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल